नलागोस् दुई तिहाइको मात - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
नलागोस् दुई तिहाइको मात
२०७४ फागुन २७ आइतवार
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष के पी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा देशले नयाँ सरकार प्राप्त गरिसकेको छ । यो अलग कुरा हो, विधि र प्रक्रियाको कुरा उठाएर ओलीविरुद्ध एकजना अधिवक्ता अदालत जानुभएको छ । सांसद पदको शपथग्रहण नगरिकनै ओली प्रधानमन्त्री बन्न मिल्दैन । पहिले प्रधानमन्त्री कि संसदीय दलको नेता कि सांसद ? भन्ने उनको जिकिर छ । यस मुद्दाले ताìिवक रूपमा खासै अर्थ राख्दैन । ओली यो देशको वहालवाला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र यो मुद्दाको जे जस्तोसुकै परिणाम आए पनि उहाँ नै प्रधानमनत्री रहिरहनुहुने निश्चित छ । हो, अदालतको फैसला भोलिका दिनमा भने संसदीय विधि अवलम्बनका सम्बन्धमा नजीर बन्न सक्ला । अदालतको फैसलापछि पहिला संसद्को शपथ लिने कि कार्यकारिणीको अंग बन्ने भन्ने कुरा निश्चित हुनेछ ।
ओली नेपालको अत्यन्त भाग्यमानी राजनीतिज्ञमध्ये एक हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । उहाँ यस देशको सामान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न । उहाँ सम्भवतः इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभएको छ । माओवादीसँगको गठबन्धनपछि संसद्मा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको वर्तमान सरकार सङ्घीय समाजवादी फोरम (ससफो)को समर्थनपछि दुई तिहाइ बहुमतको सरकारमा परिवर्तन हुने निश्चित छ । उता अर्को मधेशकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) भने अहिलेसम्म अनिर्णित छ । राजनीतिक वृत्तमा चलेको चर्चाअनुसार राजपा पनि सरकारमा सहभागी हुने कुरामा अनुकूल छ । राजपा पनि सरकारमा गएछ भने प्रतिपक्षका रूपमा एकमात्र दल नेपाली काङ्ग्रेसको मात्र संसद्मा उपस्थिति रहनेछ, त्यो पनि न्यून संख्याको प्रतिपक्ष । इतिहासमा दुई तिहाई बहुमतको यस्तो अवसर बीपी कोइरालाको सरकारलाई मात्र उपलब्ध थियो । ओली शक्तिशाली बन्ने क्रम अझै जारी छ । राष्ट्रपतिमा वर्तमान राष्ट्रपतिको निरन्तरता रहने निश्चित भएपछि ओली पार्टीभित्र पनि थप शक्तिशाली बनेको प्रमाणित भएको छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख सबै आफ्नै गठबन्धनको भएको र तुलनात्मक रूपमा कमजोर प्रतिपक्ष रहेको वर्तमान अवस्थामा दुई तिहाईको यो अवसरलाई साँच्चै वास्तविक शक्तिमा बदल्न ओलीले सक्नुभयो भने दुई अवस्थाको सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । पहिलो, देशले साँच्चै अग्रगमनको यात्रा गर्नेछ र नेपाली जनताको विकास, सम्पन्नता र समृद्धिको सपनाले मूर्त रूप लिनेछ । दोस्रो, दुई तिहाईको उन्मत्त मात चढेर ओली सरकार अधिनायकवादी सोचको दास बन्न सक्छ । पछिल्लो अवस्थाको उपस्थिति नहोस् भन्नका लागि सरकारको सशक्त खबरदारी आवश्यक छ भने पहिलो अवस्थाका लागि सरकारले निःशर्त सहयोग प्राप्त गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षका रूपमा काङ्ग्रेस यसप्रति गम्भीर हुनु जरुरी छ । कमजोर प्रतिपक्षका रूपमा काङ्ग्रेसको उपस्थितिलाई धेरैले महìव दिएका छैनन् तर इतिहास साक्षी छ, सरकारमा भन्दा प्रतिपक्षका रूपमा काङ्ग्रेस सफल रहँदै आएको छ र काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पार्टी सभापतिले यसको जनाउ संसद् बैठकको पहिलो दिन नै दिइसक्नुभएको छ । एउटा कुरा भने निश्चित छ आगामी दिन संसदीय अभ्यासका दृष्टिले निकै रुचिकर हुनेछन् । दुई तिहाईको बहुमत सरकारका सामु कमजोर मानिएको प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो रहला ? सरकारका सामु घुँडा टेक्ला वा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै आफ्नो अवस्थामा सुधार गर्ला ? के संसदीय मूल्य मान्यताको प्रवद्र्धन गर्न सक्ला ? यस्तै प्रश्न सरकारका सामु पनि तेर्सिन्छन् । के सरकारले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सक्ला ? के कमजोर मानिएको प्रतिपक्षको उपस्थितिमा सरकार संसदीय मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्न अग्रसर रहला ? वा प्रतिपक्षलाई पेलेरै जाने मनस्थिति प्रदर्शित गरी अधिनयकवादतर्फको यात्रामा अग्रसर रहला ? यी सबै स्थिति घोषित÷अघोषित भीडन्तको परिचायक हो । आशा गरौँ यस्तो केही पनि हुने छैन र पाँच वर्षका लागि शासन सञ्चालनको जनमत प्राप्त गरेको वर्तमान सरकारले कुनै भेदभाव नगरी कसैलाई काखा पाखा नगरी देश र जनताको हितमा काम गर्नेछ । प्रतिपक्षले जिम्मेवारी बोध गरी उचित कार्यमा सहयोग गर्नेछ, गर्नैपर्छ ।
व्यक्तिगत रूपमा ओलीको पक्षमा मत व्यक्त गर्न सकिन्छ । उहाँ दूरद्रष्टा हुनुहुन्छ । राजनेताका गुण छन् उहाँमा । विकासप्रतिको स्पष्ट धारणा छ । सबै निदाइरहेको बेलामा उहाँ सम्पन्नता र सम्मुनतिको सपना देख्न सक्नुहुन्छ । योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि छ । नेतृत्वको शैली पनि उत्कृष्ट छ । यी सबै उहाँका राम्रा पक्ष हुन् । यति हुँदाहुँदै पनि केही अवस्था छन्, जसको आधारमा उहाँको आलोचना गरिन्छ । सबभन्दा बढी आलोचना उहाँको बोलीको हुने गरेको छ । तर यही बोली उहाँको चमत्कारिक नेतृत्व शैलीको आधार पनि हो । तैपनि आशा गरौँ अब दोहोरिएर देशको सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछिका दिनमा यही आधारमा मात्र उहाँले आफ्नो आलोचना हुन दिनु हुने छैन । यसतर्फ उहाँ गम्भीर बन्नुहुनेछ । अहिलेसम्मको अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने ओली शक्ति मन पराउने नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ । जुन कारणले अन्य पार्टीका नेताको आलोचना हुन्छ ती कारण त ओलीमा पनि छन् । तर त्यसतर्फ एमाले पंक्तिमा खुलेरै कुरा उठ्दैन । होइन भने पार्टी अध्यक्ष भएका नाताले उहाँ पनि संसदीय दलको नेता बन्नुभएको हो र दुईपटक प्रधानमन्त्री । स्थिति यस्तै रह्यो भने एमालेको अर्को कार्यकालको अध्यक्ष पनि ओली नै बन्ने कुरामा शंका छैन । उहाँले आफ्ना विश्वासपात्रलाई महìवपूर्ण शक्ति केन्द्रहरूमा स्थापित गराउनुभएको छ र थप गराउने मनसायमा रहेको बुझिन्छभन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नासाथ उहाँले राजस्व अनुसन्धान र सम्पति शुद्धीकरणजस्ता अर्थमन्त्रालय मातहतका निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नुभएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्रीको मातहत रहेकोमा अब राष्ट्रिय अनुसन्धान पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राखिने अपुष्ट चर्चा चलेको छ । यो सबै कुराको संकेत ओली साँच्चै शक्तिको अभ्यासको तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । यसका आधारमा केन्द्रीय एकद्वार निगरानी बढाउने मनशाय राखिएको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । यी सबै अवस्थाका आधारमा उहाँको दिमागमा कुन हावा हुण्डरी चलिरहेको छ भन्ने कुराको अनुमान त गर्न सकिएला तर यकिनका साथ केही भन्न सकिन्न ।
कामना सकारात्मक परिणामकै गरौँ । आशा गरौँ, उहाँलाई हाल प्राप्त उपेन्द्रसहितको प्रचण्ड बहुमतको प्रयोग विरोधीलाई सिध्याउने र प्रतिस्पर्धीसँग इवी साध्न प्रयोग हुने छैन । यो शक्ति देशको विकास गर्न रचनात्मक ढंगले प्रयोग हुनेछ । होइन भने जनता सदाका लागि कसैका हुँदैनन् । जनताले हिजो एउटालाई विश्वास गरेका थिए । आज एउटाप्रति विश्वास व्यक्त गरेका छन् । भोलि अर्कोतर्फ मोडिनेछन् । देशको प्रत्येक पटकको संसदीय निर्वाचनले यही प्रमाणित गरेको छ । लोकतन्त्रमा जनता सर्वशक्तिमान हुने कुरा भारतको केरलामा भएको पछिल्लो विधानसभाको निर्वाचनले पनि पुष्टि गरेको छ । विगत अढाई दशकभन्दा बढी समयदेखि सत्तासिन रहेको कम्युनिस्ट सरकारलाई त्यहाँको जनताले चुनावका माध्यमबाट सत्ताच्यूत गरेका छन् । होइन, दुई तिहाई बहुमतको दुरुपयोग गरेर संविधान संशोधनमार्फत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई तिलाञ्जली दिने हो भने त कुरा बेग्लै हो । तर लोकतन्त्रको बानी परिसकेको जनताबीच यो कार्य त्यति सहज भने छैन, यो निश्चित छ । सहज हाल सरकारको सहयोगी बन्ने स्थितिमा रहेको मधेशकेन्द्रित दलका करण पनि हुने छैन । त्यसो त राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ भनिन्छ । अझ नेपालको राजनीतिमा त यो तथ्य पटकपटक प्रमाणित हुँदै आएको छ । हिजोका दिनमा मधेशविरोधीको छवि बनाएका ओली आज एकाएक मधेशकेन्द्रित दलसँग मिल्ने कुरा कल्पना गरिएको थिएन । मधेशका जनताले पनि यो कुरा सोचेका थिएनन् । तर आजको यथार्थ फरक छ । त्यसैले भविष्यका बारेमा अहिले नै कुनै टिप्पणी गर्नु हतारो हुनेछ । यसका लागि केही समयको प्रतीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।